Moto Z Ciyaar, falanqeyn iyo ra'yi | Androidsis
Imaatinka nooca Lenovo ee jihada Motorola ayaa u oggolaatay Waqooyiga Ameerika inay sii wadaan inay ilaashadaan falsafadooda sicirka qiimaha iyo barnaamijyada tayada leh. Iyo khadka Moto by Lenovo waa tusaale ka mid ah.
Maanta waxaan kuu keenay a falanqaynta fiidiyowga oo buuxa ee Moto Z Play, aalad ku sharadaysa naqshad qaabaysan oo leh waxyaabo lala yaabo oo aad u xiiso badan.
2 Astaamaha farsamada ee Moto Z Play
3 Shaashad in ka badan la kulmaysa waxa laga filayo meel dhex-dhexaad ah
4 Moto Mod, tijaabinta hadalka JBL SoundBoost
5 Batariga aan dhamaanayn
7 Sawirro laga qaaday kamaradda Moto Z Play
8 LOOGU TALAGALAY
Dhismaha ciyaarta 'Moto Z play' shaki la'aan waa aqoonsiga ugu weyn ee boosteejada iyo meesha sumaddu ugu dadaalka badan tahay si markaa gacanta ugu jirto ay u keento dareen aad u wanaagsan. Waana lagu guuleystaa.
Waxaan ka hadleynaa taleefan lagu dhisay agagaarka jiifka bilaa dhiig ah biraha ku dhammaanaya a jir aluminium sandblasted tayo sare leh. Dhammaadka dhammeystiran waa mid adag, oo leh laba cristales Gorilla Glass dhig labada dhinacba xagga hore iyo xagga dambe, taas oo siinaysa aaladda aallad weyn oo naxdin iyo dhicitaan ah.
Sidii aan idhi, dareenka gacantu waa mid aad u wanaagsan oo muujinaya shaqada wanaagsan ee ay Motorola ka qabatay arrintan. Dabcan, cabirka si aad ah looma habeynin tan iyo inta laga yeelanayo shaashad 5.5-inji ah, taleefanka waa weyn yahay(156.4 x 76.4 mm) iyada oo lagu xisaabtamayo jir hoose, oo ah halka ay ku taal akhristaha sawirka faraha.
Haa, kuwooda 7mm qaro weyn waxay qalabka ka dhigaan terminal aad u wanaagsan. Intaas waxaa sii dheer, culeyskiisa oo ah 165 garaam ayaa Moto Z Play ka dhigaya inuusan dhibsanayn gacanta saacado yar kadib markii la isticmaalo.
Muuji taas Moto Z Play wuxuu leeyahay afhayeen hore Taasi waxay u egtahay mid run ah, acisku xiraha loogu talagalay Moto Mods dhinaca dambe ee hoose, isku xiraha USB Type-C isku xiraha iyo jaangooyada codka ee caadiga ah 3.5mm xagga hoose.
Guud ahaan, a naqshad nadiif ah taas oo muujineysa shaqada wanaagsan ee soo saaraha arrintan la xiriirta, iyadoo la siinayo Moto Z Play dhameystir tayo leh oo ka dhigaya taleefanka cusub khadka Moto Z inuu yahay xulasho aad loo jecel yahay.
Astaamaha farsamada ee Moto Z Play
Cabbirada 156.4 x 76.4 x 7 mm
Nidaamka hawlgalka Android 6.0.1 Marshmallow
Screen IPS 5.5 inji oo leh xallinta 1.920 x 1.080 pixels iyo 401 dpi
Gacaliye Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 oo leh sideed 53 GHz Cortex A2.0
Kaydinta gudaha 32 GB oo lagu ballaarin karo MicroSD illaa 128 GB
Kaamirada gadaal 16 megapixels leh f / 2.0 27 / OIS / autofocus / wejiga ogaanshaha / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / 1080p duubista fiidiyowga ee 30fps
Kaameradda hore 5 MPX / video kujira 1080p
Xuduudaha kala duwan DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / FM radio / A-GPS / GLONASS / BDS / GSM 850/900/1800/1900; Qeybaha 3G (HSDPA800 / 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - NXT-L29 NXT-L09) 4G band (1 (2100) 2 (1900) 3 (1800) 4 (1700/2100) 5 (850) 6 (900) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 17 (700) 18 (800) 19 (800) 20 (800) 26 (850) 38 (2600) 39 (1900) 40 (2300) - NXT -L29) / HSPA xawaare 42.2 / 5.76 Mbps iyo LTE Cat6 300/50 Mbps
Tilmaamo kale Nidaamka lacag-bixinta degdegga ah / Dareeraha Faraha / Nooca C dekedda / Dareemka nano ee biyuhu (buufiyo u adkaysta) / la jaan qaadaya Moto Mod
Batariga 3.510 mAh aan laga saari karin
Qiimaha Ku iibinta Amazon kaliya 379 euros gujinaya halkan
Qalabaynta, oo aan horeyba ugu aragnay aaladaha kale, waxaan wajahaynaa meel dhexaad ah oo in ka badan dabooli doonta baahiyaha isticmaale kasta. Ka dib markii aan isku dayay muddo bil ah waxaan xaqiijin karaa in terminaalka shaqeeyaa si habsami lehKama dhibtoonayo jerks iyo, sida aad ku aragtay falanqayntayada fiidiyowga, Moto Z Play ayaa dhaqaajin kara ciyaar kasta, iyadoon loo eegin inta awood garaaf leh ee ay u baahan tahay, iyada oo aan dhibaato weyn lahayn.
Qalabku wuxuu u wareegaa Android 6.0 si deg deg ah oo habsami leh, isagoo siinaya waxqabad aad u fiican dhammaan dhinacyada. Aynu sidoo kale xusuusano taas Motorola waxay u heellan tahay qaabeynta ugu yar, wax aan shaqsiyan u jeclahay oo ka dhigaya shaqada garoonka inay si fiican u shaqeyso oo aan lahayn raadraac codsiyada qashinka ah.
Akhristaha faraha Moto Z Play si fiican ayey u shaqeysaa, iyadoo siineysa aqrin faro dhaqso leh oo sax ah. Dabcan, waxay ila tahay in cabirku uu xad dhaaf yahay, gaar ahaan haddii aan tixgelinno booska salka hoose ee aaladda. Waxaan u maleynayaa in dhinacan Motorola ay aheyd inuu sameeyo akhristaha biometrik ka weyn.
Shaashad in ka badan la kulmaysa waxa laga filayo meel dhex-dhexaad ah
Motorola waxay ku faantaa inay xalliso xalalka Samsung si ay nolol ugu hesho boosteejooyinkeeda iyo Moto Z Play waa tusaale cusub oo tan ah. Sida iska cad waxay ahayd inaad dhinto qarashka oo aad ka fogaato qolladaha QHD 1.440p, laakiin si kasta oo ay tahay shaashadda Moto Z Play lagu dhejiyo ayaa runtii wanaagsan.
Waxaan ka hadlayaa ap5.5-inch Super AMOLED guddi leh xalka HD 1080 buuxa Py oo ka tagaya cufnaanta 41 pixels halkii inji, taas oo u tarjumeysa khibrad adeegsade heer sare ah.
Looxyadan ayaa ka badan inta la ogyahay, laakiin kuwa aan aqoon tikniyoolajiyadan, dheh intaas Shaashadaha Super AMOLED waxay dammaanad qaadayaan midabbo aad u muuqda oo leh dhalaal aan caadi ahayn iyo xaglo daawasho ah oo aan la koobi karayn, iyo sidoo kale midabka madow ee ugu hooseeya ee lagu gaari karo taleefanka casriga ah.
Dheh cadaanka sidoo kale aad ayuu ufiican yahay iyo, guud ahaan, terminaalku wuxuu bixiyaa caddeyn weyn. Waxaan sidoo kale qiyaasi karnaa heerka saturaalka iyadoo loo eegayo dhadhankeena.
Bannaanka lshaashadda si aad u wanaagsan ayuu u shaqeeyaa, oo u oggolaaneysa waxyaabaha ay ka kooban tahay in laga daawado jawiga ugu iftiinka badan, marka lagu daro Muuqaalka Muuqaalka Motorola waxay u oggolaaneysaa in lagu muujiyo waqtiga iyo ogeysiisyada shaashadda laga joojiyo taasna ay si dhib yar u cuneyso ilaha ay ugu mahadcelineyso tikniyoolajiyadda loo adeegsaday guddiga.
Moto Mod, tijaabinta hadalka JBL SoundBoost
Mid ka mid ah walxaha ugu kala geddisan ee khadka Moto Z ayaa la socda Moto Mod. Waana taas, qaabka ugu nadiifsan ee loo yaqaan 'Project Ara', soo-saaraha ayaa ku soo daray isku xiraha gadaasha qalabka si uu ugu xiro dhinacyada kala duwan. Waxaan isku dayay JBL Sound Boost ku hadla Moto Z natiijaduna waxay noqotay mid cajiib ah.
Ku saabsan naqshadeynta, ka JBL Sound Boost wuxuu leeyahay naqshad soo jiidasho leh oo aad u qiimo jaban. Mid ka mid ah faahfaahinta aan ka helay ayaa ah inay la timid gabal u adeegi doona sidii taageero noogu martiqaadaysa inaan ku raaxaysanno waxyaabo badan oo warbaahin ah ama ciyaaraha fiidiyowga ah ee shirkadda.
Faahfaahin kale oo la yaab leh ayaa la socota xaqiiqda ah in kuwa ku hadla JBL ay leeyihiin a batari u gaar ah Marka ma cuni doonno batariga Moto Z ama Moto Z Play, laakiin waa xubno kala duwan.
Tayada codka waa mid aad u wanaagsan, aadna uga sarreysa wixii lagu gaarey afhayeenka ku yaal xagga hore, laakiin 115 garaam oo culeyskiisa iyo wax ka badan ahQiimaha culus (89 yuuro) ayaa ka dhigaya in ka badan hal isticmaale inuu laba jeer ka fikiro.
Batariga aan dhamaanayn
Awoodda kale ee weyn, oo ay weheliso nashqadeheeda wanaagsan, shaki kuma jiro is-maamul madax-bannaan ee degmadan. Ciyaaraha Moto Z ayaa a 3.510 mAh batariga aan saari karin.
Waan ognahay in baterigan Moto Z Play uu bixin doono waxqabad wanaagsan, oo lagu daray xaqiiqda ah inuu ku yimaado sanduuqa xeedho TurboPower taas oo, sida uu sheegayo soo saaruhu, ay ku kacayso ilaa 9 saacadood oo ismaamul ah 15 daqiiqo oo keliya markii lagu xidho.
Waa wax laga xumaado in xeedhoku uu leeyahay USB Type C lagu daray, markaa ma heli doonno fiilo u oggolaanaya iswaafajinta PC-ga. Ku noqoshada ismaamulka, dheh intaas Waxaan awooday inaan isticmaalo taleefanka dhib la'aan 2 maalmood oo xiriir ah, wax ay aad u yar yahiin terminals gaaraan.
Markii aan siiyay adeeg dheeri ah, Moto Z Play wuxuu adkeystay maalin iyo badh dhibaato la'aan, marka waxaan dhihi karaa waxqabadkeeda dhinacan ayaa ka badan sax, kana sarreysa inta badan tartamayaasha.
Ugu dambeyntii waxaan galnaa qeybta kaamirooyinka. Iyo haa, soo-saaraha ayaa shaqo fiican ka qabtay qaybtan sidoo kale. Isaga 16 megapixel camera iyadoo laba-midab flash wax qabad leh Qabsasho aad u wanaagsan illaa iyo inta aan ku jirno deegaanno si fiican u shidan.
Gudaha iyo caawinta tooshka waxaan sawiro ka qaadi karnaa buuq fara badan, laakiin markaan isku dayeyno inaan sawirro ka qaadno sawirrada habeenka waxaan heleynaa buuqa laga naxo.
Barnaamijka kamaraduhu wuxuu leeyahay shaqooyin kala duwan, sida habka gacanta taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan hagaajino waxkasta oo kamarad Moto Z Play ah, sida isu dheelitirka cad ama heerka ISO, laakiin waa interface aad u fudud, midka ku yimaada daahirka Android.
Sawirro laga qaaday kamaradda Moto Z Play
Moto Z Play si aad u wanaagsan ayaa loo dhisay. Ma yahay taleefan soo jiidan doona muuqaallo badan iyo inay leedahay qalab wanaagsan iyo ismaamul sare. Miyuu yahay midka dhexe ee ugu fiican suuqa? Ku saabsan dhadhanka, midabada, laakiin dhab ahaantii waxay ku jirtaa 3-da sare.
Super AMOLED bandhig
100% waayo-aragnimo Android ah, wax raad ah oo bloatware ah
Qiyaasta xad dhaafka ah / saamiga shaashadda
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Moto Z Play, falanqeyn iyo ra'yi
YouTube loogu talagalay Android ayaa lagu cusbooneysiiyay bar cusub oo hoose
Motorola waxay ku dhawaaqi doontaa taleefankeeda casriga ah berri Juun 1